DHAGEYSO:Baarlamaanka dalka oo ansaxiyay in Martha Koome ay noqoto madaxa cadaaladda | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Baarlamaanka dalka oo ansaxiyay in Martha Koome ay noqoto madaxa cadaaladda
DHAGEYSO:Baarlamaanka dalka oo ansaxiyay in Martha Koome ay noqoto madaxa cadaaladda
Xildhibaanada golaha qaran ee xeer dejinta ayaa maanta yeeshay kal-fadhi ay ku ansaxiyeen in garsoore Martha Koome ay noqoto madaxa cadaaladda ee Kenya.
Guddiga JLAC ee uu hoggaamiyo Muturi Kigano ayaa warbixintiisa ku sheegay in Mrs. Martha Koome ay u qalanto in ay buuxiso jagadii uu baneeyay David Maraga.
Horraantii sanadkan ayay ahayd markii uu howlgab noqday David Maraga oo afar sano hoggaaminayay waaxda garsoorka ee Kenya.
Guddoomiyaha baarlamaanka Mr. Justin Muturi ayaa isugu yeeray kulanka lagu ansaxiyay magaca Koome.
Guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka ahna xildhibaanka laga soo doortay deegaanka waqooyiga Kuresoi Moses Kipkemboi Cheboi ayaa sidatan ugu dhawaaqay ansaxinta baarlamaanka ee Martha Koome
Mudanayaasha baarlamaanka ayaa haweeneydan ku boorriyay in ay ku dadaasho ilaalinta madax bannaanida waaxda cadaaladda ee dalka oo aynan u nuglaan cadaadiska ay suuragal tahay inuu kaga yimaado dhinacyo kala duwan.
Sidoo kale Martha Koome ayaa lagula taliyay in ay diiradda saarto dhameystirka waxyaabaha aan u qabsoomin garsoorka wadanka.
Waxaa magaceeda loo gudbinayaa madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta si uu si rasmi ah ugu magacaabo xilkan, loogu dhaariyo ugu dambeyna ay u noqoto haweeneydii ugu horreysay taariikhda dalka ee hoggaamiso waaxda cadaaladda.
Martha Koome oo horay u difaaci jirtay xuquuqul aadanaha ayaa waaxda garsoorka ee dalka ku biirtay sanadkii 2003-kii .
Next articleDHAGEYSO:Haweenka Soomaaliyeed oo ku baaqay in doorasho nabad ah la qabto